Kooxda Manchester United oo loo sheegay qiimaha ay ku heli karto Harry Maguire – Gool FM
(Leicester) 25 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa la soo warinayaa inay Manchester United u sheegtay inay qaadan doonto lacag rikoorka adduunka ah oo dhan 90 milyan oo gini haddii xagaagan uu Harry Maguire ka huleelayo garoonka King Power.
Man United ayaa la fahamsan yahay in 26-sano jirkaan uu ka mid yahay tirada xiddigaha ay birtilmaameedsanayso marka dib loo furo suuqa kala iibsiga dhammaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay ku guuldareysteen inay la soo saxiixdaan isaga Koobkii adduunka ee sanadkii hore.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Red Devils ay ku rajo weyn tahay inay Maguire ku soo qaataan adduun lagu qiyaasayo 65 milyan oo gini, laakiin Jariiradda Daily Star ayaa soo jeedinaysa in qiimaha noocan oo kale ah uu wali ka yar yahay heerka qiimaha kooxda Leicester.
Kooxda The Foxes lagu naanayso ayaa hoos u dhigtay dalab 75 milyan oo gini ahaa oo ay ka heshay kooxda Man United xagaagii la soo dhaafay, waxaana hadda la sheegayaa inay naadiga Man Utd ka doonayso lacag rikoorka adduunka ah oo dhan 80 milyan oo gini haddii ay rabaan in laga iibiyo xiddiga xulka qaranka England.
Qiimahaas ayaana sare ugu kici kara 90 milyan oo gini ka hor inta aysan Leicester heshiis la gaarin, Maguire ayaana hoos u dhigay heshiis cusub oo muddo dheer ah bishii September.
Man United ayaa sidoo kale la la xiriirinayaa difaacyo kale oo bartilmaameed u ah oo ay ka mid yihiin Kalidou Koulibaly, Toby Alderweireld, Milan Skriniar iyo Kostas Manolas.
Kooxda Liverpool oo eegeysa inay iska iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Naby Keita
Sida ay u muuqan doonto shaxda xulka qaranka Spain kulanka habeen dambe oo la sii shaaciyey... (Yaa ku soo bilaabanaya?)